RASMI: Heshiisyada La Dhamaystiray Saacadihii Ugu Danbeeyay Iyada Oo Si Rasmi Ah Uu Suuqa Kala Iibsigu U Furmay. - Gool24.Net
RASMI: Heshiisyada La Dhamaystiray Saacadihii Ugu Danbeeyay Iyada Oo Si Rasmi Ah Uu Suuqa Kala Iibsigu U Furmay.
Maanta oo isniin ah waxaa si rasmi ah u furmay suuqa kala iibsiga horyaalada Yurub waxaana si rasmi ah loo diwaan galin karaa ciyaartoydii hore heshiiska loola gaadhay iyo kuwa maanta lala heshiiyay labadaba.
Waxaa sidoo kale maanta si rasmi ah u kala wareegay xili ciyaareedkii la soo dhaafay iyo xili ciyaareedka cusub ee 2019/2020 iyada oo dhaq dhaqaaq badan uu suuqa ka dhacay 24 kii saacadood ee ugu danbeeyay.
Haddaba shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo koobaysa heshiisyadii la dhamaystiray iyo ku dhawaaqisihii la sameeyay saacadihii la soo dhaafay halkan ayaanad kaga bogan kartaa.
RASMI: Liverpool ayaa kooxda Southampton ka iibisay gool dhaliyihii amaahda Saints ku joogay ee Danny Ings kaas oo 20 milyan gini si rasmi ah ugu wareegay Southampton wuxuuna saxiixay heshiis saddex sanadood ah.
RASMI: Inter Milan ayaa ku dhawaaqday in ay si rasmi ah u dhamaystirtay saxiixa Valentino Lazaro oo ay 22 milyan kagala soo wareegtay kooxda Hertha Berlin
RASMI: Chelsea ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay heshiiskii amaahda ahaa ee Mateo Kovačić ay ka dhigtay mid rasmi ah iyada oo Real Madrid kaga iibsatay 40 milyan yuro waana heshiis aanu ganaaxii la saaray wax saamayn ah ku lahayn.
RASMI: Kooxda Borussia Dortmund ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay dhamaystirtay xidigii kooxda Barcelona ee Mateu Morey waxayna ka saxiixatay heshiis shan sanadood ah.
RASMI: Man United ayaa heshiis cusub oo waqti dheer ah ku abaal marisay da’yarka kooxdeeda ee Marcus Rashford kaas oo mushaarkiisa todobaadkii laga dhigay 300,000 kun oo gini wuxuuna saxiixay heshiis cusub oo Old Trafford ku sii hayn doona ilaa 2023 kaas oo Barcelona iyo Real Madrid meesha ka saaraya.
RASMI: Liverpool ayaa ku dhawaaqday in xidiga khadka dhexe ee Marko Grujic uu xili ciyaareedka cusub baaqi ku sii ahaan doono kooxda reer Germany ee Hertha Berlin wuxuuna amaahdii guulaystay ee xili ciyaareedkii hore sii raacsan doonaa xili ciyaareedka cusub ee 2019/2020.
RASMI: Kooxda Juventus ayaa si rasmi ah u dhamaystirtay heshiiska xorta ah ee ay kula soo wareegtay Aaron Ramsey kaas oo maanta si rasmi ah u noqday ciyaartoy Juventus ah. Aaron Ramsey ayaa maanta si rasmi u bilawday waayihiisa kooxda Juventus.
RASMI: Kooxda AS Roma ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay Napoli kala soo saxiixatay Amadou Diawara wuxuuna qalinka ku duugay qandaraas shan sanadood ah iyada oo Roma xidigan ka soo bixisay €21 milyan yuro.
RASMI: Kooxda reer Turkey ee Trabzonspor ayaa ku dhawaaqday in ay si xor ah kula soo wareegtay halyayga reer Nigeria ee John Obi Mikel kaas oo saxiixay qandaraas laba sanadood ah iyo sanad uu doorasho u haysto in u ku sii kordhiyo.
RASMI: Kooxda layaabka ka soo dhigtay Premier league ee Wolves ayaa ku guulaystay in ay heshiiskii amaahda ahaa ee Leander Dendoncker ay ka dhigtay mid rasmi ah iyada oo hore amaah ugala soo wareegtay kooxda uu Kompany macalinka u noqday ee Anderlecht.
RASMI: Chelsea ayaa ku dhawaaqday in Gonzalo Higuain uu dib ugu laabtay kooxda mulkiyadiisa iska leh ee Juvnetus kadib markii uu soo dhamaystay qandaraaskii amaahda ahaa ee uu Stamford Bridge ugu soo biiray bishii January.
RASMI: Kooxda Inter Milan ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay dhamaystirtay heshiiska difaacii kooxda Atletico Madrid ee Diego Godin kaas oo saxiixay heshiis saddex sanadood ah kaas oo dhacaya June 30,2022.
RASMI: Kooxaha Juventus iyo AS Roma ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in ay dhamaystireen heshiisyada isdhaafsi ee ay kula kala wareegeen Luca Pellegrini Leonardo Spinazzola. Juventus ayaa 22 miyan yuro ka bixisay Pellegrini halka Roma ay 29 milyan ka bixisay Spinazzola.
RASMI: Xidigii kooxda Barcelona ee Denis Suárez ayaa heshiis rasmi ah ugu biiray kooxdiisii carruurnimo ee Celta Vigo waxayna Barca xidigan ku iibisay 15 milyan yuro.
RASMI: Kooxda Napoli ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday dhamaystirka xidigii kooxda AS Roma ee Kostas Manolas kaas oo ay 36 milyan gini kula wareegtay.
RASMI: Adrien Rabiot ayaa dhamaystiray in uu ka gudbo tijaabada caafimaadka kooxdiisa cusub ee Juventus wuxuuna xili ciyaareedkii mushaar ahaan u qaadan doonaa 7 milyan yuro kadib markii uu si xor ah ugu soo biiray Juventus.